Ukuphupha kocingo Discover ➡️ ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Uthango ibiyindlela yokuziphatha yeOlimpiki ukusukela oko yaqalwa. Umahluko wenziwe phakathi kokubiyelwa kwe-epee, i-foil kunye ne-saber. Into enokubonakala ngathi ilula kwaye ikhaphukhaphu kumntu ongaqhelekanga inokufezekiswa kuphela ngoqeqesho olunzima noluzingisileyo.
Ukuhamba kweengalo kunye nemilenze kufuneka kulungelelaniswe ngokugqibeleleyo. Ngaphandle kwemeko yomzimba, uya kufikelela ngokukhawuleza kwimida yakho kulo mdlalo. Nokuba umlo uhlala "kuphela" imizuzu emithathu ngexesha lokhuphiswano, iimbaleki ziphantsi koxinzelelo oluninzi ngeli xesha kwaye zifuna uxinzelelo oluphezulu.
Kodwa ukubiyela akaziwa kuphela kwezemidlalo. "El Zorro" okanye "The Musketeers ezintathu" mhlawumbi ngabalinganiswa abaziwayo kwiifilimu ezininzi ezirhuqayo. Mhlawumbi kutshanje ubone i-movie ye-adventure enje kwaye ngoku uliqhawe lokubiyela kwihlabathi lakho lamaphupha? Okanye ngaba kunokubakho into eyahluke ngokupheleleyo emva koku, ukuba uphupha ngesimboli yephupha "ukubiyela"?
1 Uphawu lwephupha «ukubiyela» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukubiyela» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukubiyela» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukubiyela» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, "ukubiyelwa" kumfanekiso wamaphupha kuhlala kunophawu olubi. Ukubiya kubandakanya enye ukujonganaukuba uza kuza kuphupha kungekudala. Ukujongana nembambano yinxalenye yobomi bethu bemihla ngemihla, kodwa sinokufunda kwezi meko zihlala zinzima kwaye sikhule kunye nazo.
Kuba iphupha likho ngephupha lokubiya, nangona kunjalo kukho ingozi ukukhwela. Ke ngoko, ukutolikwa kwamaphupha kuyadimaza ukusabela okungxamisekileyo. Ngamanye amaxesha iimeko eziethe-ethe zifuna nje idiploma ukuba zivuthele umoya kwiseyile zomnye umntu kwaye izinto zihambe kakuhle kwakhona.
Ukuba umntu ophuphayo ngulo uphethe ikrele, uya kuba mnye kungekudala. Iihambo zibhengeze. Oku kuya kukucela umngeni ngendlela ekhethekileyo. Esona sixhobo sibalaseleyo onokusisebenzisa kolu celomngeni yingqondo yakho. Le i-razor ebukhali kunye ne-ally efanelekileyo ukuba uyakwazi ukuyisebenzisa ngokuchanekileyo.
Ukubona abantu ababini bebiyile kunokubonisa ukuba uyakulwa nabahlobo abalungileyo. Ngenxa yoko, oku kunokuthetha ukuwohloka kokugqibela kubuhlobo.
Uphawu lwephupha «ukubiyela» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokoluvo lweetoliki zamaphupha ezengqondo, zihlala zenzeka ngexesha lephupha lokubiya ukuba wenzakele isixhobo somchasi. Ke ngoko, ukuphupha kufuneka kudlule ebomini ngononophelo olukhulu kwixa elizayo, kuba ngale meko yamaphupha a inhlanhla Unokubhengeza. Nangona kunjalo, oku akufuneki kuhamba kunye nokwenzakala okubonakalayo komzimba. Rhoqo amaxesha, ukubethwa kwekamva okanye iziganeko kusiphambukisa ngokwasemphefumlweni ngakumbi ngokwenzakala komzimba.
Ukubiyela ephupheni nako kungabonakalisa izinto ezifihlakeleyo. Imvakalelo yokuziphindezela ukuba. Usenokuphathwa ngokungenabulungisa okanye ungakhathalelwa okanye wenzakaliswe ngabanye.
Ukuba umntu ophuphayo uyalwa kwaye uzikhusela kuhlaselo ngomngcelele, abavukeli bakhe abangaphantsi kwengqondo kwaye bafuna ukuziphindezela. Nangona kunjalo, umntu makacinge ngononophelo ukuba ingaba le ndlela ikhubekisayo ichanekile na. Ukuba woyisa umchasi wakho, uhlala usecaleni lokuphumelela ngokwenyani kwaye uyazi indlela yokuzikhusela kubantu abakhohlakeleyo.
Uphawu lwephupha «ukubiyela» - ukutolika kokomoya
Kwimeko yokomoya, umfanekiso wephupha "ubiyele" njengoko Isilumkiso qonda. Izixhobo ezisetyenziselwa oku zihlala zimela amandla okomoya ekufuneka esetyenziswe ngengqondo.